HTML Email + Alt Tags = A Na-erekarị Bagels | Martech Zone
N'abalị a ka m nwetara email site na Achịcha Panera. Dị ka ọtụtụ mmemme email ugbu a, ngwa email m na-egbochi ihe oyiyi. N'ihi ya, lee ihe email ahụ dị ka:
Ọ bụghị ihe siri ike… karịsịa maka ozi email mara mma nke yiri nke a:
Enweghị m ike iwepụta mmadụ ole na-ehichapụ email na-enweghị agụ ya n'ihi na… ọ nweghị ihe ị ga-agụ ma ọ bụrụ na ibudata ihe oyiyi ahụ. Nke a bụ ezigbo nsogbu na HTML ozi ịntanetị… ma ọ dị mfe izere.
Omume abụọ kachasị mma iji nyere aka mepee ọnụego na ozi ịntanetị HTML
Egosiputa ederede dika onyonyo… gosiputara dika ederede. O doro anya na ọ gaghị adị oke mma, mana ọ ga - agụta ya - nnukwu ọdịiche. Panera kwesịrị imebila onyonyo na ederede ahụ na email ahụ.Ọ ga-abụrịrị na ọ ga-ewe onye mmebe ha obere nkeji, mana ha gaara ere ọtụtụ bagel karịa!
Ọ bụrụ na ndị na-emepụta atụlitere iji 100% HTML dabere na onyonyo, ha gaara eji ya ihe niile na mkpado na nke ọ bụla n'ime ihe oyiyi iji tinye ederede na-akpali akpali. Maka pasent nke ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmemme na-egbochi ihe onyonyo ahụ, ha nwere ike ịgụ ma ọ dịkarịa ala gbasara ọhụrụ Salmon Salad ọhụrụ, Asiago Bagel Breakfast Sandwich, Black Cherry Smoothie na Morning Bagel site na ọdịnaya nke alt tag.
Kwụ ụgwọ nkeji ole na ole ma dejupụta mkpado alt gị (alt bụ ederede ọzọ ma gosipụta mgbe ihe oyiyi adịghị) ga-eme ka ọnụego gị meghee na ọnụego ntụgharị na email HTML dị ka nke a. Ọ na-egosi na e mepụtara ozi ịntanetị ndị a na AzụNghọta m bụ na ha nwere nchịkọta akụkọ email dị elu na nsụgharị niile nke ngwa ha nke na-akwado nke a.
Food iwu imagery… na obi abụọ adịghị ya na ụfọdụ gbara ọkpụrụkpụ ederede ga-abịarukwa ọzọ ndị debanyere aha iji budata ihe oyiyi na gbakwunye adreesị ozi-e na ha mma ndepụta.
Ọzọkwa, ekwenyere m na ọtụtụ ozi ịntanetị na-eweta ozi ọkọlọtọ na-enweghị ọdịnaya ọ bụla na ha niile bụ onyonyo n'ihi na ọ bụ ụzọ ndị spammers iji zipụ site na unyi. Panera nwere ike meziwanye ọnụọgụ nnabata ya site na iji ederede karịa na email.
Tags: blackberry vesos iphonemara amaraagugoịzụta mkpebimmetụtannyocha gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Jenụwarị 26, 2010 na 11:31 PM
Naanị mgbakwunye: otu ụzọ iji nọgide na-enwe nhazi ma ọ bụ akara aka ga-akpụzi usoro ntanetị nke email gburugburu ederede ALT nke ihe oyiyi. Yabụ ịme ederede ALT dị ka isi okwu site na iji ya gburugburu , dị ka ihe atụ dị mfe.
Otu ihe omuma nke m nuru mgbe nile bu iche na onyonyo ga - apụ - jiri onyonyo dịka ihe dị mfe, mana enweghị isi, gbakwunye na ntinye email. Mgbe niile na-echetara ndị na-emepụta ihe!
Naanị umengwụ. 🙁
Feb 2, 2011 na 6:18 PM
Ọmarịcha ọkwa, ejiri m n’aka na onye ọ bụla ahụla nke a na igbe mbata ha, ọ bụ ezie na ihe atụ dị n’elu dị njọ karịa! Ọ bụ nnukwu ego na ọtụtụ ndị mmemme email na-echefu.